On sept 7, 2018 12 723
« Lasa ny dia tsy miverina intsony eo amin’ny fizorana ho any amin’ny fifidianana », anisan’ny tanjona hirosoan’ny kandida laharana faha-4 anaty bileta tokana, RASOLOFONDRAOSOLO Zafimahaleo dit DAMA Mahaleo sy ny mpiara-dia aminy izany. Mitsipaka ny fanemorana ny datim-pifidianana izy ireo araka izany.
Vonona ny ekipa ary anatin’ny ezaka fahafampatarana misimisy kokoa ny kandida sy ny programanasany. Miantso ny herivelona rehetra hifanome tanana izy araka izany. Izay rahateo antony hanaovan’izy ireo tsipaipaika, hiarahan’ny besinimaro mitondra ny Ankara birikiny mba ahafahan’i Dama manatratra ny tanjona iombonana dia ny valibabena, ho an’ny taninjanaka sy vahoaka ao aminy.
Nisy ny fahampahafantarana ny laharana finday mba ahazoan’ny rehetra mandefa vola na fanampiana ho kandida, teny amin’ny Pietra Hôtel, Analakely .
« CROWFUNDING » na TSIPAIPAIKA VALIMBABENA no anarana itondrana ny hetsika. Ny malagasy hita fa resy lahatra amin’ny vina entin’i Dama dia afaka mandrotsaka fanampiana na vola ao amin’ny kaonty sy ny laharana finday 034 29 400 04 na 032 51 447 57.
« Tanjona ny fampandraisana andraikitra ny tsirairay eo amin’ny ho aviny », hoy RASOLOFONDRAOSOLO Zafimahaleo, kandida faha-4 ao anaty bileta tokana nanazava.
FIADIDIANA NY REPOBLIKA: NAMETRA-PIALANA NY FILOHA RAJAONARIMAMPIANA HERY